रुसको विरोध बाबजुद फिनल्यान्ड र स्वीडेनले नेटोमा आवद्ध हुन आवेदन दिए « Dainik Online
प्रकाशित मिति : ४ जेष्ठ २०७९, बुधबार २ : ५९
काठमाडौं। रुसको चर्को विरोधका बाबजुद फिनल्यान्ड र स्वीडेनले नेटोमा आवद्ध हुन आवेदन दिएका छन्।
बिहीबार फिनल्यान्ड र स्वीडेनले नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गलाई पत्र बुझाएका हुन्।
ब्रसेल्सस्थित मुख्यालय रहेको नेटोले यस विषय ऐतिहासिक भएको जनाएको छ। नेटोमा आवद्ध राष्ट्रहरुले यो विषयमा छलफल गरेर ती दुई राष्ट्रलाई संगठनमा आवद्ध गराउने कि नगराउने भन्नेबारे निर्णय लिनेछन्।
रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरिरहेको अवस्थामा फिनल्यान्ड र स्वीडेनले नेटोमा आवद्ध हुने चाहना देखाएका हुन्। यस कार्यको रुसले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ।
रुसले युक्रेन पनि नेटोमा आवद्ध नहोस् भन्ने चाहन्छ।
यसअघि रुसले चेतावनी दिदै फिनल्याण्ड र स्वीडेनको नेटो सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने निर्णयहरू गम्भीर गल्ती हुने बताएको थियो।
‘यो अर्को गम्भीर गल्ती हो जसको दूरगामी परिणामहरू छन्’ रुसका उप विदेशमन्त्री सर्गेई र्याबकोभले भनेका थिए।
नेटो के हो र यो किन स्थापना भयो?
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै नेटो सन् १९४९ मा स्थापना भएको थियो। यो गठबन्धन प्रारम्भमा तत्कालीन सोभियत संघ ‘युएसएसआर’ को कुनै पनि विस्तारलाई रोक्न र महादेशमा द्वन्द्वको सम्भावनालाई कम गर्नका लागि अमेरिका र यसका युरोपेली सहयोगीहरूद्वारा गरिएको प्रयासको एक हिस्सा थियो।
त्यसपछिका दशकहरूमा यसले निरन्तर रूपमा आफ्नो समूह विस्तार गरेको छ। सोभियत संघको पतनपछि यसले मध्य र पूर्वी युरोपेली राज्यहरूलाई आफ्नो श्रेणीमा ल्याएको छ।
यो विस्तारले मस्कोलाई समस्यामा पारेको छ। यतिबेला त झन् यो गठबन्धनले सीमा नजिकै सोभियतकालिन राज्य युक्रेनलाई आफ्नो समूहमा जोड्न चाहिरहेको छ।
नेटोका सदस्य राष्ट्र को–को हुन्?
नेटोमा हालसम्म ३० सदस्य राष्ट्रहरु छन्। बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, फ्रान्स, आइसल्यान्ड, इटाली, लक्जेमबर्ग, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, पोर्चुगल, बेलायत र अमेरिका नेटोका संस्थापक सदस्यहरू हुन्।
नेटोको सबैभन्दा कान्छा राष्ट्र नर्थ मेसेडोनिया हो जो सन् २०२० मा यसको सदस्य भएको हो। युक्रेन, बोस्निया, हर्जेगोभिना र जोर्जिया चाहीँ नेटोका सहयोगी राष्ट्रहरु हुन्। यिनीहरुले नेटोको सदस्य बन्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
नेटोको उद्देश्य राजनीतिक र सैन्य माध्यमबाट आफ्ना सदस्यहरूको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु रहेको छ।
युक्रेन नेटोमा किन आवद्ध हुन चाहन्छ?
युक्रेनले बारम्बार आफू नेटोको सदस्य राष्ट्र बन्ने चाहना व्यक्त गर्दै आएको छ। नेटोमा आवद्ध हुने विषय युक्रेनको संविधानमा नै लेखिएको छ।
नेटो गठबन्धनमा सामेल भएको खण्डमा युक्रेनको रक्षात्मक शक्ति बढ्नेछ, किनभने नेटोको सिद्धान्त सामूहिक रक्षा हो। नेटोको स्थापना सन्धिको धारा ५ मा यसो भनिएको छः सहयोगी राष्ट्रविरुद्धको आक्रमण सबै सहयोगीहरू विरुद्धको आक्रमण हो। त्यसकारण सबै सदस्य राष्ट्र एकअर्काको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।